Home FOOTBALL MANAGER Santiago Solari tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tatitra feno momba ny mpilalao baolina kitra izay fantatra indrindra amin'ny anaram-bosotra hoe "Indiecito". Ny rakitsary tantanin'ny tantaran'i Santiago Solari sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahavariana hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ny tantaram-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny anjara andraikany amin'ny Real Madrid. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Santiago Solari izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Santiago Solari Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Ny fiainan'ny taloha sy ny fianakaviana
Manomboka eo, ny anarany feno dia Santiago Hernán Solari Poggio. I Santiago Solari dia teraka tamin'ny andro 7 tamin'ny volana 1976 ho an'ny rainy, Eduardo Solari ary ny reniny, Alicia Susana Poggio tany Rosario, Argentina Teraka tany Rosario, Arzantina. Tanàna nahaterahany, ary koa ny toerana nahaterahana Lionel Messi.
Tsy nihalehibe tamin'ny ray aman-dreniny i Santiago. Nifoha niaraka tamin'ireo efatra mianadany izy; Esteban, David, Martins ary Liz Solari. Solari dia teraka ho fianakaviana iray fanatanjahan-tena. Ny fianakaviany misy ny baolina kitra miaraka amin'ny baolina kitra any amin'ny 80% mihoatra ny an'ny ankohonany, izay ahitana ny fianakaviany.
Vetivety tamin'ny fahazazan'ny zaza dia lasa mora ho an'i Santiago kely ny nanamboatra ny fiainany tamin'ny baolina kitra. Tsy mahagaga raha niaina fiainana niainan'ny fianakaviana ny rainy. Mahagaga fa tsy dia nieritreritra ny hirotsaka an-tsehatra mihitsy i Santiago tamin'ny mbola kely. Raha ny ankamaroan'ny mpilalao baolina kitra avy amin'ny baolina kitra toy izany dia hanomboka ny asany amin'ny taona 6, ny tanora Solari dia tsy nandray velively ny baolina matanjaka toy ny zazakely. Izy irery ihany no nilalao baolina kitra mba hahafinaritra azy mandra-pahatongan'ny zava-nitranga iray indray andro.
Santiago Solari Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Ny fomba nanombohana ny lalao baolina kitra
Ny fahavaratry ny 1994, ary ny Mondialy tsy hay hadinoina dia ho tonga any Etazonia. Ny ekipam-pirenen'i Arabia Saodita dia niorina tao amin'ny toeram-pianarana iray tao amin'ny oniversite New Jersey (Richard Stockton College ankehitriny ny Stockton University) any Philadelphia atsimo-atsinanana. Zava-dehibe ny fifanintsanana tao Santiago satria ny fianakavian'i Solari dia niandraikitra ny ekipa nasionalin'i Arabia Saodita.
Fantatrao ve?… Ny zokin'i Jorge, rain'i Santiago, dia "El Indio"Solari no lehiben'ny ekipa Saodiana raha nanampy an'i Eduardo rainy. Ity ambany ity ny sarin'ireo rahalahy tamin'ny taonany.
Nandritra ny toby fiofanana nandritra ny dimy herinandro, i Santiago dia nieritreritra lalina momba ny fananganana asa amin'ny baolina kitra. Izany dia tonga taorian'ny dadan'i Eduardo sy Lenahan, mpilalao baolina kitra tapany tato ho ato tao Richard Stockton (toerana niarahan'ny ekipan'ny SAUDI) nifanerasera akaiky.
Nandritra izany fotoana izany dia noporofoin'i Lenahan teo amin'ny sary etsy ambony ny soso-kevitra ho an'i Eduardo raha toa ka afaka nandany semester nanatrika ny oniversite tany Richard Stockton i Santiago zanany lahy lahy 17 taona ary nilalao baolina kitra ho an'ny ekipan'ny oniversite ihany koa. Samy nanaiky i Santiago sy i Eduardo dadany fa ho azony izany fanorenana haingana alohan'ny hitsambikinany amin'ny tontolon'ny baolina matihanina.
Santiago Solari Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Ny fahombiazan'ny Saodiana
Tim Lénah dia nahazo valisoa soa avy amin'ny fianakavian'i Solari tamin'ny fanapahan-keviny hanome an'i Santiago haingam-pandeha. Voatery handao ny fialantsiny i Lenahan taorian'ny nanomezana azy ny fifanarahana amin'ny fitantanana ny fampiofanana an'i Arabia Saodita mandritra ny fanomanana ny Coupe du Monde.
Samy niaraka tamin'ireo Solari mirahalahy ireo i Lenahan ary nanampy an'i Arabia Saodita mba hanatontosana ny lalao baolina manerantany mahomby indrindra any Etazonia.
Ho an'i Arabia Saodita, ny "Solari Family"Dia hitoetra mandrakizay ao am-pony noho ny fiantraikany maharitra eo amin'ny lalao mondialy 1994 World Cup.
Santiago Solari Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Ny Mondialy Post-1994
Taorian'ny mondialy 1994 World Cup dia nanomboka ny asany tamin'ny Richard Stockton College i Santiago Solari. Ny zazakely 17-taona kely dia nanomboka nilalao baolina tao amin'ny oniversite 3 noho i Tim Lenahan izay lasa mpanolotsaina vaovao.
Ireo tombontsoa azon'izy ireo hahita an'i Santiago Solari mandritra izany fotoana izany dia hahatsiaro mpilalao mahay sy mahira-tsaina izay nahazo fanomezam-pahefana ara-teknika. Santiago dia hita ho toy ny olona afaka mamaky ilay lalao amin'ny ambaratonga hafa noho ny mpanohitra azy.
Ho diso fanantenana ny mpanohitra azy izay nampijaly azy teny an-tsaha fa hanimba azy fa tsy hiezaka hiatrika ny fahaiza-manaony.
"Tsy zava-niainan'ny baolina kitra izany,"
Niteny i Santiago Solari Soccer America ao amin'ny 2001 tamin'ny fotoany tao amin'ny Richard Stockton (tatitra TorCom.com).
"Saingy niaina ny fiainana, momba ny fihaonana amin'ny olona, ​​ny fahafantarana ny kolontsaina samihafa sy ny fomba fisainana samihafa. Nanokatra ny lohako sy ny faniriana ho mpilalao baolina matihanina "
Ankoatra ny baolina kitra, i Santiago dia nampiasa ny fahafahana hianatra any amin'ny oniversite izay nahalalany ny teny anglisy tsara kokoa.
Satria izy no tsara, dia naka ny efa-bolana tamin'ny ekipany Stockton izy talohan'ny nanombohan'ny fahafaha-manao asa ara-barotra niaraka tamin'ny Newell Old Boys. Aza adino, io no klioba nentina Lionel Messi. Tamin'ity taona ity ihany tao amin'ny 1995, Solari dia nanapa-kevitra ny hanangona ny asany miaraka amin'i Renato Cesarini.
Tsy sahala amin'ireo mpilalao baolina kitra sy mpitantana hafa izay nandia ny taom-pandrosoana nandritra ny taona maro, dia nalain'i Solari fotsiny ny 2 taona baolina kitra talohan'ny nidirany tao amin'ny rafitra pro.
Tamin'ity fotoana ity, mbola tao amin'ny vanim-potoanan'ny 1995-1996, i Solari dia nahafantatra fa ny hany làlana ahafahan'izy ireo mankany Eorôpa dia tokony ho anisan'ny klioba lehibe ary hahazo ny fireneny. Nanapa-kevitra ny hanomboka ny asany ambony amin'ny River Plate izy. Tao amin'ny klioban'i Arzantina, Solari dia nametraka ny anarany tamin'ny nitarihany ny klioba handresy ny Libertadores Cup ao 1996. Izany dia nizotra ho any Eoropa.
Santiago Solari Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Mitsangàna mba ho ankizilahy
Tao 1999, Santiago dia niampita ny Atlantika mba hiaraka amin'i Atletico Madrid ao Espaina. Io no fotoana niadiana ny klioba ary teo amin'ny sisin'ny fifindrana. Misaotra ny fomba filalaovany izy, nahaliana an'i Real Madrid tamin'ny herintaona niaraka tamin'i Atletico.
Real Madrid dia tsy nisalasala nanetsika ny famotsorana an'i Santiago Solari ary nanasonia azy tao amin'ny 2000, tamin'io taona io ihany i Atletico dia nandositra. Santiago Solari dia nilalao nandritra ny fizaran-taona dimy tao amin'ny Real (2000-2005) ahitana efatra hafa miaraka amin'ny angano Zidane, izay tonga tao amin'ny 2001. Izy dia mpikambana tena manan-danja tamin'ny vanim-potoana 'Galactico'.
Fantatrao ve?… Solari dia nanomboka ny hetsika izay nahatonga izany Zidane ka nahatonga ny volleyball malaza nanohitra an'i Leverkusen tao amin'ny Ligy 2002 Champions League. Ankoatra ny famoronana sehatra, dia nahazo tanjona tena matanjaka ihany koa i Solari ho an'ny Real Madrid. Jereo ny sasantsasany amin'ireo tanjony etsy ambany;
Santiago Solari Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Fiainana manokana
Nandritra ny lalao androany, ny lalao filalaovan'i Solari dia tsy nahazo ny lalao baolina kitra tany Espaina. Ny toetrany tsara koa dia nahazo azy trophy.
Tamin'ny taona 2002, fantsom-pahitalavitra frantsay malaza, Canal + nifidy an'i Santiago ho "The Playeri Sexiest of the Year"Noho ny endriny mahatalanjona.
Ho valin'ny loka, hoy i Santiago Solari;
"Misaotra an'ireo olona nifidy ahy aho, nefa azoko antoka fa voafehy izany," Solari quipped. "Hahita raha manolotra asa hafa amin'ny indostrian'ny sarimihetsika aho rehefa miala. baolina kitra "
Ary momba ny fiainana manokana an'i Solari, dia nofaritan'i Arzantina indray mandeha CNN Mitovy amin'ny "Fampianarana ambony, filozofika ary tia boky." Taorian'ny fisotroan-dronono hilalao baolina dia nanoratra tsanganana ho an'ny mpitarika Espaniola El Pais i Solari.
Santiago Solari Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Relationship Life
Tsy toy ny ambiny ao amin'ny fianakaviany ihany, Solari dia miezaka manokana ary mitazona tsipiriany mikasika ny vadiny sy ny zanany irery ihany. Amin'izao fotoana izao, tsy manana tondro-tsoratra media sosialy izy. Saingy ny tsaho momba ny vadin'i Santiago Solari sy ny ankizy dia samy manana ny fomba hivoahany. Araka ny tatitra, i Santiago dia manambady manan-janaka telo.
Santiago Solari Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Fiainana ny fiainam-pianakaviana
Momba ny Rainy sy ny dadany: Ny fifidianana baolina kitra dia nanomboka tamin'ny varotra roa, Jorge Raul sy Eduardo Miguel izay namorona ny baolina kitra an'ny Solari Family. Ireo rahalahy roa voalaza etsy ambany dia nanomboka nilalao baolina voalohany tany Newell's Old Boys sy Rosario Central.
Na dia tsy niara-nilalao izy ireo noho ny fahasamihafan'ny taonan'ny taona izay nanasaraka azy ireo. Anisan'ireo rahalahy roa i Jorge. Fantatrao ve?… Jorge Solari nilalao an'i Angletera tamin'ny ampahefa-dalana tao amin'ny World Cup 1966. Ireto ambany ireto no noraisiny tamin'ny Anglisy nandritra ny World Cup 1966.
Nandritra ny asany nilalao tao Meksika, Jorge Solari dia nomena anarana hoe "El Indio". Ity anarana ity dia nadika tamin'ny Santiago Solari izay nomena anarana hoe "El Indiesito"Izay midika hoe Indian Little. Ny rain'i Santiago Eduardo Miguel Solari dia nanomboka ny asa aman-draharahany tany Rosario Central (taona 1966) tamin'io taona io ihany ny zokiny lahy nilalao tao amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany. Ity ambany ity ny sarin'ny rain'i Santiago nandritra ny asany.
Eduardo nilalao ny asa ambony rehetra tany Amerika Atsimo (Arzantina & Columbia) ary nisotro ronono tamin'ny taona 1981.
Ny fianakaviana Solari koa dia nanana lehilahy mpilalao baolina kitra tonga hiditra manambady ny zanany vavy. Tamin'ny taona 1992, Natalia, havan'i Santiago, zanakavavin'i Jorge Solari dia nanambady mpandresy nandritry ny fifanintsanana nandritra ny telo taona, Fernando Redondo (sary etsy ambany). Redondo dia naneho ny Real Madrid sy ny ekipan'i Arzantina.
Santiago Solari Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Mpikambana ao amin'ny Fianakaviana
Anisan'ireo rahalahin'i Santiago, Esteban Andrés Solari Poggio Tano sary etsy ambany, no malaza indrindra. Ny mpilalao baolina kitra ao Arzantina dia teraka tamin'ny 2nd of June, 1980.
Esteban nandritra ny fotoana niasany dia mpilalao baolina ary nitifitra mihoatra ny tanjona 120 teo amin'i 2001 sy 2016. David Eduardo Solari Poggio notsongaina etsy ambany dia ny malaza manaraka eo amin'ireo rahalahy ao Santiago.
Teraka tamin'ny 21st of March, 1986 tany amin'ny tanànan'i Barranquilla any Columbia i David. Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana azy, dia milalao izy izao Enosis Neon Paralimni FC ao amin'ny Cypriot Second Division. Martin Solari, izay fantatry ny ankamaroany dia ilay zandriny indrindra ho an'i Santiago. Tahaka ny vadin'i Santiago sy ny zaza, dia kely ihany koa no fantatra momba ny renin'i Santiago Solari izay mandeha amin'ny anarana Alicia Susana Poggio.
Momba an'i Sister Solari: Liz Solari dia malaza Mpilalao sarimihetsika arzantina izay nanomboka ny asany ho modely, talohan'ny nidirany tao amin'ny sinema teo an-toerana sy vahiny.
Liz dia teraka tamin'ny volana 18, 1983, in Barranquilla, Kolombia. Ny fotoana nahaterahany dia nifanandrify tamin'ny fotoana nitantanan'ny rainy ny ekipa Columbia.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Santiago Solari momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Maurizio Sarri tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa